इनडोर स्पेस अकौस्टिक प्यानलको शारीरिक संरचना - समाचार - Suzhou Soundbetter Architectural Materials Co., Ltd.
इनडोर स्पेस ध्वनिक प्यानल शारीरिक संरचना
भित्री ठाउँ24mm पलिएस्टर ध्वनिक प्यानलशरीर संरचना
1. फ्रेम। समर्थनको रूपमा, काठको पट्टीहरू, एल्युमिनियम मिश्र धातु प्रोफाइलहरू वा बाक्लो पर्खालहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।
2. समग्र सतह तह सुरक्षित गर्नुहोस्। सामान्यतया, पोरोसिटी 20% भन्दा बढी हुन्छ, मोटाई 20% भन्दा बढी हुन्छ, वा पातलो टिनप्लेट, आल्मुनियम प्लेटिनम वा प्लास्टिकको पाना फुटेको हुन्छ। प्वाल व्यास 4-8 मिमी छ।
3. ध्वनि-अवशोषित फिलर। ग्लास फाइबर कच्चा माल, र ग्लास फाइबर कपडा र उत्कृष्ट हावा पारगम्यता र एक निश्चित कम्प्रेसिभ शक्ति संग अन्य सामग्री अनुहार आवरण तहको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। भिजेको र चिसो प्राकृतिक वातावरणमा, एकल-पक्षीय वा दुई-तह छिद्रित एल्युमिनियम प्लेट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।24mm पलिएस्टर ध्वनिक प्यानलछिद्रपूर्ण संरचनाको सट्टा तह।
4. पेंच। जस्तै धातु सामग्री बोल्ट, लिफ्टिङ हुक, एंकर बोल्ट, आदि। लागू गर्दा, प्रत्येक सतह तह ध्वनि क्षेत्रमा राखिएको छ, जो कच्चा माल को ध्वनि-अवशोषित प्रभाव को पूर्ण उपयोग गर्न लाभदायक छ।
(1) मोडेल विशिष्टता, विशिष्टता, मोडेल विशिष्टता र कुल संख्या जाँच गर्नुहोस्24mm पलिएस्टर ध्वनिक प्यानलप्यानलहरू।
(२) ध्वनि-शोषक बोर्ड दुई दिनको लागि स्थापना गर्न साइटमा निर्माण गर्नुपर्छ, ताकि ध्वनि-अवशोषित बोर्ड आकार र मुख्य किल कोठामा एकीकृत गर्न सकिन्छ।
(१) ले ढाकिएको पर्खाल24mm पलिएस्टर ध्वनिक प्यानलबोर्ड डिजाइन रेखाचित्र वा निर्माण रेखाचित्र अनुसार मुख्य किल संग स्थापित हुनुपर्छ, र मुख्य किल सही र हल गर्नुपर्छ। मुख्य किलको सतह स्तर, चिल्लो, खिया र विकृति रहित हुनुपर्छ।
(२) संरचनात्मक पर्खाल निर्माण गर्नु अघि वास्तु डिजाइनको विशिष्टता अनुसार समाधान गर्नुपर्छ। मुख्य किलको व्यवस्था ध्वनि-अवशोषित प्यानलहरूको व्यवस्थासँग अनुरूप हुनुपर्छ। काठको किल छतहरू बीचको अन्तराल 300mm भन्दा कम हुनुपर्छ, र हल्का इस्पात किल विभाजनहरू बीचको अन्तराल 300mm भन्दा बढी हुनु हुँदैन। 400mm मुख्य किलको स्थापना लम्बाइमा ठाडो र छोटो हुनुपर्छ24mm पलिएस्टर ध्वनिक प्यानलबोर्ड।
(३) काठको किल छतको सतह तह र ग्रामीण ग्रासरुटहरू बीचको दूरी वास्तविक नियमहरू बमोजिम हुनेछ।
अघिल्लो:ध्वनिक प्यानलहरूको सफाई र मर्मतसम्भार
अर्को:3D ध्वनिक पर्खाल को स्थापना